Avibase is an extensive database information system pamusoro pezvisikwa zvose zvenyika, zvine mamiriyoni ane mamiriyoni nemamiriyoni gumi nezviuru uye 22,000 subspecies of shiri, kusanganisira kugoverwa kwemashoko e 12,000 zvizvarwa, taxonomy, zvinyorwa mumitauro yakawanda uye nezvimwe. Nzvimbo iyi inotungamirirwa naDenis Lepage uye yakagarwa naBird Studies Canada, weCanada mutengesi weBirdlife International. Avibase yave iri basa riripo kubva muna 1992 uye ini zvino ndakagadzirira kuzvipa sekushumira kune shiri-kutarisa uye nesayenzi.
© Denis Lepage 2019 - Nhamba yezvinyorwa zvino kuAvibase: 26,026,900 - Last update: 2019-10-18
Shiri yezuva: Caprimulgus poliocephalus (Abyssinian Nightjar)
Mufananidzo uripo flickr.com .
Nzvero rwekutsvaga kwezuva: Swan Hill (Rural City), Victoria, Australia
Misoro yekuchechedza ichangobva kuongororwa
Misoro yekuchechedza ichangobva kuongororwa:
Recent mitsva yenyika matsva
Recent mitsva yenyika matsva :